Kpido: leverage pinterest | Martech Zone
Kpido: leverage pinterest
Kedụ ka nchịkọta wee nweta ozi ahụ niile?
Bọchị Sọnde, Machị 29, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'izu ụka a, m na-atụgharị (dịka ọ na-adị). Ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ị mepee Google Analytics wee hụ mmadụ ole na-agụ ndepụta RSS gị? A sị ka e kwuwe, ndị a ka na-aga eleta saịtị gị na ọdịnaya gị, ọ bụghị ya? N'ezie, nsogbu bụ na faili RSS anaghị ekwe ka koodu ga-egbu mgbe ọdịnaya gị mepere (ụdị). Ibe weebụ gị na-eme, agbanyeghị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụtakwu banyere